Maxaabiis fara badan oo ka baxsatay Nigeria - BBC News Somali
Maxaabiis fara badan oo ka baxsatay Nigeria
6 Nofembar 2014
Image caption Xabsi ku yaala magaalada lagos,ee waddanka Nigeria
Adeegyada xabsiyada waddanka Nigeria, ayaa waxa dhibaato ku ah in ay maxaabiista si wanaagsan u xiraan.
Maamulka xabsiyada ee dalkaasi ayaa sheegaya in 2,255 maxaabiis ah ay ka baxsadeen xabsiyada shantii sano ee la soo dhaafay kuwaas oo badankood aan la ogeyn halka ay ku sugan yihiin.
Kooxda Boko Xaraam ayaa waxa ay xabsiyada ka furteen tira badan oo ayaga ka tirsan.
Ku dhawaad 500 oo maxaabiis ah ayaa sanadkii 2009-kii waxa ay ka baxsadeen xabsi ku yaala magaalada Maiduguri, bishii la soo dhaafayna boqolaal ayaa baxsaday kaddib markii ay kooxda Boko Xaraam ay qabsadeen magaalada Mubi.
Todobaadkana kooxda Boko Xaraam waxa ay qarxiyeen god u dhawaa darbiga xabsi ku yaala gobalka Kogi si ay u sii daayaan maxaabiis tobaneeya ah.
Kooxdaasi ayaa waxaa mardhow ay weerareen warshad soo saarta shamiitada oo Faransiiska laga leeyahay taas oo ku taala waqooyiga Nigeria, waxa ayna halkaasi ku qabsadeen miinooyin badan oo loo adeegsan karo in xabsiyo kale oo badan lagu jabsado.
Xaalada amniga oo faraha ka sii baxeysa ayaa waxa ay walaac badan ku heysaa dadka reer Nigeria, oo la amaa kaagsan xilliga kooxda Boko Xaraam laga taqalusin doono.
Waxaa jira warar badan oo sheegaya in ciidamada ay ka cararayaan halkii ay ka difaaci lahaayeen magaalooyinka iyo tuulooyinka iyada oo kooxdaasi ay sii wadaan la wareegida dhulal kale oo ay ku soo rogayaan shareecada islaamka qaabka ee ay u aaminsan yihiin.